Kuba in vitro ukusetyenziswa diagnostic kuphela
Nceda ufunde le phakheji ufake phambi ngenyameko ukusebenzisa ukulandela ngqo le miyalelo. Ukuthembeka kweziphumo kulingwa alunakuqinisekiswa xa kukho nasiphi na isitenxo ukusuka imiyalelo kule faka package.
Diagnostic Kit 25-hydroxy Vitamin D (fluorescence kulingwa immunochromatographic) is a kulingwa fluorescence immunochromatographic ekufunyanisweni ubungakanani 25-hydroxy Vitamin D (25 (OH) vd) e serum yabantu okanye iplasma, apho ubukhulu becala kusetyenziswa ukuhlola amanqanaba ivithamin D.It i abangabancedani ukuxilongwa reagent.All isampuli HIV kufuneka kuqinisekiswe zezinye neendlela. Olu vavanyo ilungiselelwe ukusetyenziswa yobungcali lwempilo kuphela.
Vitamin D i vitamin kwaye yincindi steroid, ubukhulu becala kuquka VD2 kunye VD3, ogama akhayo elifana kakhulu. Vitamin D3 and D2 eziguqulelwe kwi-25 hydroxyl ivithamin D (kubandakanywa dihydroxyl-25 vitamin D3 kunye D2). 25 (OH) vd emzimbeni womntu, ngqeqe- oluzinzileyo, yoxinaniso phezulu. 25 (OH) vd ibonisa isixa vitamin D, kunye nokukwazi ukuguquka ivithamin D, ngoko 25 (OH) vd ithathwa ukuba uphawu olukhulu ngenxa nokuvavanya umgangatho vitamin D.The Diagnostic Kit isekelwe immunochromatography kwaye ukunika isiphumo ngaphakathi imizuzu eli-15.
UMGAQO OF THE INKQUBO
I-inwebu ye isixhobo test isale udibaniso BSA kunye 25 (OH) vd kwi kummandla uvavanyo kunye nebhokhwe umvundla anti IgG lezibulala kwi kummandla wolawulo. Marker pad ukuba kugalelwe yi uphawu fluorescence anti 25 (OH) vd omzimba kunye umvundla IgG kwangaphambili. Xa sokuhlola isampula, 25 (OH) vd xa sample edibana ngayo fluorescence iphawulwe anti 25 (OH) vd omzimba, yaye umxube omzimba. Phantsi yintshukumo immunochromatography, ukuhamba ezintsonkothileyo kwicala iphepha izifunxi, xa complex wadlula kummandla uvavanyo, Isiphawuli ezamahala ezibengezelayo kuyakudityaniswa 25 (OH) vd kwi membrane.The yoxinaniso ka-25 (WO) vd na ukungqinelana kweenkcukacha negative ukuba uphawu fluorescence, kwaye luxinzelelo lwezinto 25 (OH) vd kwi sample kungabonwa yi fluorescence immunoassay kulingwa.
Amacandelo iphakheji 25T :
ikhadi .Test ngamnye ngefoyile ye pouched kunye desiccant 25T
isisombululo .Umntu 25T
isisombululo B 1
.Package ukufaka 1
Izixhobo ezifunekayo nezingaveliswanga
Sample ingqokelela container, Isibali
SAMPLE ekuqokelelweni nasekugcinweni
iisampulu 1.The lukwazi kuba serum, lweeHedfowuni anticoagulant plasma okanye EDTA plasma anticoagulant.
2.According iindlela eziqhelekileyo ukuqokelela isampula. Serum okanye iplasma isampuli angagcinwa refrigerated kwi 2-8 ℃ ngenxa 7days kunye cryopreservation ngezantsi -15 ° C iinyanga ezi-6.
3.All Kuphephe isampuli imijikelo ngumkhenkce-obuhle.
Inkqubo yovavanyo sesixhobo funda manual immunoanalyzer. Inkqubo reagent vavanyo ngolu hlobo lulandelayo
1.Lay bucala zonke wezenzi kunye neesampule lobushushu egumbini.
2.Open lalibekwa Immune Analyzer (Wiz-A101), ngenisa igama elithile akhawunti lokugqitha ngokungqinelana indlela esebenza ngayo kwisixhobo, uze ufake interface ubhaqo.
3.Scan ikhowudi dentification ukuqinisekisa umba uvavanyo.
4.Take ngaphandle ikhadi test evela kwingxowa alumuniyam eliqinileyo.
5.Insert ikhadi test kumngxuma wokufaka ikhadi, ikhodi QR, aqingqa umba uvavanyo.
6.Add 30μL serum okanye iplasma isampuli A solution, kakhle.
7.Add 50μL B isisombululo umxube ngasentla, kakhle.
8 .Shiya lo mxube imizuzu eli-15.
9.Add 80μL mxube isampula kakuhle ikhadi.
10.Click i "uvavanyo umgangatho" iqhosha, emva kwemizuzu eli-10, esi sixhobo iza ibhaqe ngokuzenzekelayo ufako lwekhadi test, kuba uyakwazi ukufunda iziphumo ezivela uboniso isisitheliso kwisixhobo, kwaye irekhodi / print iziphumo zovavanyo.
11.Refer ukuya uqeqesho Portable Immune Analyzer (Wiz-A101).
25 (OH) vd Uluhlu eliqhelekileyo: 30-100ng / ml
Kucetyiswa ukuba Ilabhoratri nganye nokumisa obabo uluhlu oluqhelekileyo elimele bakhona nomonde.
Iziphumo zeemvavanyo INGUQULELO
.I ngaphezu datha ubude bomtya reference emiselwe ukuba data efumanise le khithi, kwaye kucetyiswa ukuba elabhoratri ngamnye kufuneka amisele ixesha lokuphumla reference ngenxa ukubaluleka efanelekileyo kwezonyango abemi kulo mmandla.
.Le xi 25 (OH) vd ingaphezulu reference uluhlu, kwaye utshintsho ukusebenza komzimba okanye impendulo xi kufuneka excluded.Indeed ezingaqhelekanga, kufuneka ukudibanisa lwezonyango uphawu kokuxilongwa.
.Iziphumo yale ndlela zisebenza kuphela kuluhlu reference esekwe le ndlela, kwaye iziphumo azikho kuthelekiseka ngqo kunye nezinye iindlela.
Izinto .Amanye nabo kunokubangela iimpazamo kwiziphumo bangabonwa, kuquka izizathu zobugcisa, iimpazamo zokusebenza kunye neminye imiba isampula.
.Le ikhithi iinyanga-18 kwi-ubomi ukususela kumhla wokwenziwa. Ukugcina iikhithi elingasetyenziswanga kwi 2-30 ° C. MUSA ngumkhenkce. Musa ukuyisebenzisa ngaphaya umhla wokuphelelwa.
Kuthande ukuvula ingxowa etywiniweyo de ube ukulungele ukwenza uvavanyo, yaye uvavanyo-ukusetyenziswa enye Kucetyiswa ukuba kusetyenziswa (ubushushu 2-35 ℃, ukufuma 40-90%) phantsi kokusingqongileyo olufunekayo phakathi imizuzu 60 ngokukhawuleza njengoko kunokwenzeka.
Diluent .Sample isetyenziswa ngoko nangoko emva kokuba ukuvulwa.
.Le Ikhithi kufuneka ivalwe ize ibakhusele ukufuma.
.Zonke zezinto ezintle ziya kungqinisiswa yi kwezinye neendlela.
.Zonke iisampulu ziya uthathwe ekungcoliseni ezinokubakho.
DO NOT ukusebenzisa reagent eziphelelwe lixesha.
DO NOT ngani wezenzi phakathi iikiti kunye iqashiso ezahlukileyo kungekho ..
DO NOT usebenzise amakhadi uvavanyo kunye naziphi na izinto ezilahlwayo.
.Misoperation, isampuli ngokuloqa kakhulu okanye kancinci ingakhokelela kunokubangela ezinxaxhileyo.
mhlathi nayiphi kulingwa liqesha izilwa mouse, eli ithuba ikhona ngenxa yokuphazamiseka izilwa-anti-mouse yabantu (Hama) kwi ndlovu. Zokuhlolwa evela kwizigulane abaye bafumana amalungiselelo omzimba monoclonal moshilongo okanye unyango ingaba Hama. Iisampulu ezinjalo kunokubangela iziphumo okungamanga okanye bubuxoki ezimbi.
.Le kwiziphumo zovavanyo kuphela ukuba kuthethwa lwezonyango, asifanele kusebenza njengentsika kuphela moshilongo lwezonyango kunye nonyango, nezigulane ulawulo lwezonyango kufuneka ingqalelo comprehensive kuhlanganiswa kunye neempawu zayo, imbali yezonyango, amanye amaxwebhu anxulumene noviwo elebhu, impendulo unyango, lwezifo kunye nolunye ulwazi .
.Le reagent isetyenziswa kuphela xa iimvavanyo serum kunye plasma. Ingase ukufumana japan oluchanekileyo xa zisetyenziselwa ezinye iisampula ezifana namathe kunye nomchamo kunye njl
Linearity 5 ng / ml ukuya 120 ng / ml ecaleni isalamane: -15% ukuya + 15%.
Yomgama ukungavumelani: (r) ≥0.9900
ukuchaneka Izinga recovery liya kuba phakathi 85% - 115%.
(Akukho nanye kwezi zinto kwi interferent ahlolwe aphazamise kwi kulingwa) Interferent yoxinaniso Interferent
athwala 200μg / ml
1.Hansen JH, et al.HAMA Ukuphazamisa Immunoassays Murine Monoclonal unalo-Based [J] .J of Clin Immunoassay, 1993,16: 294-299.
2.Levinson SS.The Nature of Heterophilic Isilwa kunye Indima Immunoassay Ukuphazamisa [J] .J of Clin Immunoassay, 1992,15: 108-114.
Key to neempawu ezisetyenziswayo:
-In vitro Diagnostic Medical Device
Store ku 2-30 ℃
Musa Not kwakhona
Jonga Imiyalelo For Sebenzisa
Idilesi: 3-4 Floor, NO.16 Building, Workshop Bio-zonyango, 2030 Wengjiao West Road, Haicang District, 361026, Xiamen, China
Yinyaniso: + 86-592-6808278
Previous: Kit zokuxilonga D-Dimer (fluorescence immunochromatographic kulingwa)
Okulandelayo: Kit zokuxilonga senhliziyo Troponin I (fluorescence immunochromatographic kulingwa)
Kit zokuxilonga senhliziyo Troponin I (fluoresc ...
Kit zokuxilonga D-Dimer (fluorescence kumajoni omzimba ...
Kit zokuxilonga Isoenzyme MB of Creatine Kin ...